Vokatr’ilay tsaho nampisavorovoro… : mpianatra iray tapa-tanana, iray naratra voahitsakitsaka | NewsMada
Vokatr’ilay tsaho nampisavorovoro… : mpianatra iray tapa-tanana, iray naratra voahitsakitsaka
Namela takaitra na ara-tsaina, ara-batana ho an’ireo mpianatra teto an-drenivohitra ny savorovoro sy sahotaka vokatr’ilay tsaho niely momba ny hoe “fanaovana vakisinin’ny pesta”. Mpianatra roa no fantatra fa naiditra hopitaly etsy amin’ny HJRA. Ny iray tapa-tanana, ny faharoa naratra mafy voahitsakitsaka noho ny fifanosehana.
« Mpianatra roa ao amin’ny EPP Anosibe no manaraka fitsaboana ao amin’ny HJRA nanomboka omaly, noho ny fahavoazana mahazo azy vokatry ny fifanosehana tao anatin’ny savorovoro nitranga teo amin’ny EPP Anosibe. 7 taona ilay ankizivavy ary tapaka teo amin’ny sorony, ary 5 taona kosa ilay ankizilahy voahitsaka ka nahitana « œdème multiple ». Tsy misy ahina ny aina fa mbola mitohy kosa ny fitsaboana azy ireo », hoy ny talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamana ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana, Rakotoarivony Manitra omaly. Mampalahelo ny vokatry ny savorovoro satria ankizy tsy manan-tsiny no lasa mitondra takaitra noho ny tsaho naelin’ny sasany.
Ny tena olana tany am-piasana, teny an-tsena no nahare ny tsaho ny ankamaroan’ny ray aman-dreny fa tsy naheno vaovao ka tonga dia nikoropaka nandeha tany an-tsekoly naka ny zanany ary nisy nanao amboletra mihitsy. Betsaka koa ireo nanome tsiny ny mpanabe nefa tsy avy amin’izy ireo ny niandohan’ny korontana. Manentana ny ray aman-dreny hanatitra sy haka ny zanany any an-dakilasy ny tomponandraikitra ao anatin’izao savorovoro izao hisorohana ny fifanomezan-tsiny.
Nilaza kosa ny minisitry ny Fanabeazana fa rava ny fifampitokisana teo amin’ny ray aman-dreny sy ny mpanabe vokatry ny savorovoro niseho afakomaly, mila averina izay hampizotra tsara ny fampianarana. Tokony hiresaka amin’ny ray aman-dreny ny mpanabe hamerenana ny fifampitokisana eo amin’ny roa tonta. Nambarany fa raha tsy matoky ny mpanabe ny ray aman-dreny, tsy tokony handefa ny zanany any an-tsekoly aloha.
Efa nihena ny trangana pesta vaovao
Momba ny valanaretina pesta, tao anatin’ny 15 andro farany, fokontany 60 sisa ahitana pesta eto Antananarivo : Ankatso, Andraisoro, Ambohimirary, Ambanidia, Ambatomaro… Tranga iray na roa no miseho amin’ireo. Anisan’ny niasa mafy andro sy alina nahazoana ny vokatra hatramin’izao ny mpiasan’ny fahasalamana ka ahafahana miteny fa voafehy ny pesta, amin’izao fotoana izao. Efa mizotra amin’ny fiafaran’ny valanaretina pesta eto amintsika. Ambara fa nifarana ny valanaretina rehefa tsy misy tranga vaovao ao anatin’ny 15 andro misesy.